Wiil Soomaali 14-sano jir ah oo la musaafurinayo | Somaliska
Wiil Soomaali 14-sano jir ah oo la musaafurinayo
Wiilka lagu magacaabo Sharmaki Abubakar ayaa dhawaan laga musaafurinayaa Sweden, ka dib markii ay Laanta Socdaalku (Migrationsverket) sheegtay in uusan 14 sano jir ahayn balse uu 20 jir yahay. Wiilkaan ayaa loo celinayaa Talyaaniga oo faro ka soo qaaday, sida uu qoray wargeyska Expressen.
“Waxaan noqonayaan keligay haddii la i celiyao. Waan jeclahay Sweden oo waxaan doonayaa in aan ku noolaado halkaan oo aan iskuul dhigto sida caruurta kale “ ayuu Sharmaki u sheegay Expressen.
Sharmaki ayaa Somalia ka soo tagay sanadkii 2013 isagoo doon ku soo galay Yurub ka dibna ay Talyaanigu siiyeen sharci ku meel gaar ah. Ka dibna waxa uu u soo gudbay Sweden oo uu sharci ka dalbaday balse Migrationsverket ayaa diiday sheekadiisa, iyagoo u sheegay in lagu celinayo Talyaaniga.
Warqadaha uu Sharmaki kala yimid Talyaaniga ayaa waxaa ku cad in uu 20-sano jir yahay balse isagu waxa uu leeyahay waxaan jiraa 14 sano. Waxaa sidoo kale aaminsan Erika Johannesson oo ah masuulkiisa iyo quburo kale. Baaritaan ay ku sameeyeen dhaqaatiirta Sweden ayaa waxaa ku cad in Sharmaki uusan wali qaangaar ahayn isla markaana ay da’diisu tahay qiyaastii 14 sano jir.
Erika Johannesson oo loo diiday in ay noqoto wakiilka Sharmaki maadaame aysan Laanta Socdaalku caruur u arag ayaa hadana waxay isku dayaysaa in ay caawiso. Waxay sheegtay in ay ogtahay in dadka qaarkood ay been ka sheegaan da’dooda balse Sharmaki uu runta sheegayo.
Gunilla Rosengren oo ah madaxa diiwaan galinta ee Laanta Socdaalka xafiiska Göteborg ayaa wargeyska u sheegtay in aan wax qalad ah laga galin Sharmaki. Waxay intaas ku dartay in xitaa haddii loo aqoonsado in uu caruur yahay markasta dib loogu celinayo Talyaaniga maadaama uu halkaasi sharci ku leeyahay. Masuuliyada Sharmaki iyo baaritaanka da’diisa waxay u taalaa Talyaaniga ayay hadalkeeda ku soo afjartay Gunilla.
August 4, 2015 at 07:35
Waxan ku oran lahaa dadka waxa sameeyaa ha ka tanasulan sababto ah mahan wax fiican
Horta Waxaa iga weydiiin talo AH ma SHARCI AYAA sioobaxay dhahaya hadii qofku Italy sharci kuleeeyahay xataa inuusan tirsi xaq u laheyn IYO in lacafiyo???
Way tirsadaan walaalo dadka itali xataa sharci kulahaa Swden iska dhiibay way jiraan oo 18 bilod soo tirsaday iyago sharci lahaa waana lasiiyay sharciga wadankan inta San war kahaaya ani
abdala ahmad says:
sxb wan kaxumahay kolee dhibmale ilaah haku fududeeyo ilaah hakaaqabto waxan ilaah hakaqabto wax kherqabane ilaah hakiisiiyo sxb wan kaxumahay
DHAL DHAFOOR AAY KU TAAL wejigaan 14 sano ma u ekee laakin muslin waaye ilaah ha u gargaaro
Weey Ka Muuqataa In uuw Yar yahay Dadka dhahaayo Dhalin Dhafoorkey ku Talaa Ma iyagaa hoyadii Ka umuliyay Somali iyagaa isku wada Cadaw ah Allow U Sahal Amuurahiisa Wiilka yar
Igu horey aqyarta Waa idin salamay Marka aan ka.hadlo arinta inan yar Somalia haddii aan nahnay wiil da.diisa Waa iska cadahay in uu yar yahay dood kama taagno insha Allah aan wada duceyno far ku taga ha la iska deyno all thanks
waxna waa sharci oo qaab lo mara jira waxna waa sharci daro ok sharmake xata hadii eey kuu diidan sweden sharci ama sida rabto kawedo nin yar ba tahay ha ujoojin swedena mahan kaligeed yurub waxa tagta filand iyo meeshi aad is ledahay wax wad kahelesa taas wa talo ok hadaan wx ka iraahdo talyaniga ayagaba iska ddhiiba yurub talyani oo ila Garmany ustareliya ila canada ayeey tagan maxa yelay waa dad badan oo mususqmasuq kubadanyahay marka dad ayagiiba tahriibaya miya anaga na mareen kara wa maya itali waa wado laso maro dadka inta badana waso maren lkn uma arko wax fiican qof kaso hajiray in layirahdo dib bad ugu noqnesa waxeey ka dhigantahay adoo lagu yiri burjiko dab kashidanyahay ayaa lagugu fadhisnaa iska diida daanyeerkas talyaniga waxba idiima haayo